प्रायः सोधिने प्रश्न - डो Dong्गगुआं वासिन प्याकेजिंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
तल तपाईले केही अनुकूल प्रश्नहरूको उत्तरहरू फेला पार्नुहुनेछ अनुकूलन बक्स सिर्जना गर्न वरिपरि। यद्यपि सबै अर्डरहरू अलिक फरक छन्, त्यसैले तपाईंले सोचिरहनु भएको अरू केहि पनि प्राप्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
म कसरी जान्दछु यदि मेरो कलाकृति प्रिन्ट गर्न योग्य छ भने
हाम्रो डिजाइन इञ्जिनियरले कुनै पनि टेक्निकल सरोकारहरू (आर्ट वर्क रेजोलुसन, ब्लरिनेस, स्प्लिट्स, पातलो रेखा र ब्लीड्स) को लागी तपाइँको अनुकूलन बक्स डिजाइन समीक्षा गर्नेछ र यदि फेला पारिएमा, तपाइँलाई प्रमाणमा तपाइँको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि नोट गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ कसरी समाधान गर्ने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने। कुनै पनि मुद्रण सरोकारहरू उल्लेख छ कि, हाम्रो ईन्जिनियर प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई मद्दत गर्न खुसी छन्। यो ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो टीमले हिज्जे वा व्याकरण त्रुटिहरूको जाँच गर्दैन, न त तिनीहरूले डिजाइन सामग्रीमा कुनै व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ।
कस्ता छनौटहरूले मेरो मूल्य निर्धारणमा असर गर्दछ?
एक पैमाने मा अर्थव्यवस्था संग एक उच्च मात्रा निर्माता को रूप मा, वाशिन प्याकेजि custom कस्टम बक्स उपलब्ध उद्योग को सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु प्रदान गर्दछ। मूल्य निर्धारण सामान्यतया पाँच चीजहरूको एक कारक हुन्छ: आयाम, बक्स शैली, बक्समा मसी कभरेज, बक्स सामग्री, र मात्रा। यदि तपाईंसँग मूल्य निर्धारण वा छनौटहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंको अर्डरलाई असर गर्न सक्छ, हाम्रो ग्राहक समर्थन teat मद्दत गर्न खुशी छ।
यदि मैले उद्धरण प्राप्त गर्न चाहान्छु भने कुन जानकारी तपाईंलाई थाहा दिनु पर्छ?
कृपया तपाईंको बक्स आकार, मात्रा, सामग्री र मुद्रण रंग पठाउनुहोस्। एफओबी मूल्य हाम्रो सामान्य मूल्य अवधि हो, यदि तपाईंलाई सीआईएफ वा सीएफआर चाहिएमा, कृपया तपाईंको गन्तव्यको पोर्ट हामीलाई सूचित गर्नुहोस्। तपाईंबाट सक्कली नमूनाहरू स्पष्टीकरणको लागि उत्तम हुनेछ, बक्स चित्रहरू वा डिजाईनहरू व्यावहारिक पनि छन्!
यदि उत्पादनहरूमा केहि क्वालिटी मुद्दाहरू छन् भने तपाईं कसरी यसलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ?
प्रत्येक बक्स डिब्बानहरूमा प्याक गर्नु अघि QC द्वारा १००% निरीक्षण गरिनेछ। यदि क्वालिटी मुद्दाहरू हाम्रो कारणले भएको हो भने, हामी प्रतिस्थापन सेवा प्रदान गर्नेछौं।
के तपाईं परीक्षणको लागि नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी ग्राहकहरुका लागि नि: शुल्क नमूनाहरु प्रदान गर्दछौं, यो तपाईलाई भाडा शुल्क लाग्छ।